TorLaser - Tsvuku, Bhuruu, Violet, Green Laser Pointer | Laser - TorLaser.com
Bhuruu & Violet Laser
TorLaser ipurojekiti yakazvarwa muna2009 kubva pakuda kweve zvinoverengeka mafeni enyika laser.
Yakamuka kubva pakuda kupa saiti yakasarudzika mukati laser kunongedzera kwesimba chairo pamutengo unodhura kuitira kuti chero fan angave neyehunyanzvi hwemhando yezvigadzirwa nemutengo wakanakisa.
Red lasers ndiyo yaive yekutanga kuonekera kweanopfuura makumi matatu emakore, saka yatowana yakasimba kwazvo uye yakaderera mitengo yakawanda. Mafungu emakona ezvitsvuku anotangira pa630nm kusvika pa670nm. Iwo akanyanya kupenya pane iyo girini, asi panzvimbo pezvo simba rayo kupisa rakanyanya kukwirira. Iyo tsvuku lasers yakanakira chero mhando yekushandisa: inonakidza, yekuedza, yekuratidzira…
Iwo green laser poers ikozvino ndiyo inonyanya kushandiswa, nekuti iyo green green inosvika 6 times yakajeka kune ziso remunhu pane dzvuku. Iwo wavelength yegreen pointers kubva pa500nm kusvika pa550nm, 532nm yakagadziriswa seyakajairika. Green lasers yakanakira chero mhando yekushandisa: inonakidza, nyeredzi, kutora mifananidzo, kuyedza, zviratidziro, zviratidzo, zvinoonekwa, kukwira gomo, kuvhima, kuvhara mhepo…
Bhuruu uye violet laser pointers ichangobva kuoneka, ndiyo yakasarudzika uye yakaoma kuwana. Iyo bhuruu inosanganisa nekukuru kukuru kwekuvhenekera kwama greens ane simba kupisa matsvuku. Iko kusimuka kwemakona eblue pointers ndeye 445nm uye violets 405nm. Blue uye violet lasers yakanakira chero mhando yekushandisa: inonakidza, kutora mifananidzo, kuyedza, zviratidziro uye kunyange bhuruu yekuongorora nyeredzi!
Isimba Chairo chete
2 Makore Warranty
Real Photos & Mavhidhiyo
© 2009-2020 - Poweredzwa naTORLaser.com® - Premium Laser Pointers